Antso Ho Famotsorana Ireo Miaramila Iraniana Dimy Nalaina An-keriny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Febroary 2014 14:02 GMT
Ireo miaramila Iraniana dimy nalaina an-keriny. Sary navoakan'i Jaish al-Adl tao amin'ny Twitter
Mampiasa ny diezy Twitter #FreeIranianSoldiers (Avotsory ireo Miaramila Iraniana) ny Iraniana mba hanaitra ny saina mikasika ireo mpiambina sisintany Iraniana nisy naka an-keriny tao amin'ny sisintanin'i Iran-Pakistana. Nitaky fandraisana andraikitra sy namoaka ny sarin'ireo miaramila nalaina an-keriny eto ambony tao amin'ny kaonty Twitter-ny ny vondrona mpikomy Baloch Miozolomana Sonita, Jaish al-Adl (Tafiky ny Fitsarana).
Miasa ao Sistan-Balochistana ny Jaish-al-Adl, iray amin'ireo faritany midadasika sy mahantra indrindra ao Iran, izay ahitana Sonita-Miozolomana 2 tapitrisa. Nangataka fahaleovantena bebe kokoa avy amin'ny governemanta Shiita ao Teheran ny foko Baloch sy ireo mpikomy Sonita-Miozolomana tao anatin'izay taona vitsy izay.
Tamin'ny volana Oktobra 2013, nanafika sy namono mpiambina sisintany Iraniana 14 ny Jaish-ul-Adlt, izay nantsoin'ny fanjakana Iraniana ho vondrona mpampihorohoro. Ho setrin'izany, olona 16 avy ao Sistan-Balochistana voalaza fa miaraka amin'ny Jaish-ul-Adl no novonoina araka ny fitsarana nataon'reo manampahefana ao amin'ny firenena anjakan'ny Shiita.
Mohammad Reza Aref, mpanao politika reformista Iraniana, nisioka hoe:
Miaro ny sisintanintsika hoan'ny rariny, fiarovana ary ny filaminantsika ireo miaramila Iraniana
Mpikaroka sady bilaogera media sosialy Iraniana Narima Gharib nisioka hoe:
Nahoana no manana kaonty ao amin'ny Twitter ny vondrona mpampihorohoro?
Hoy kosa ilay Kanadiana-Iraniana Maryam Nayeb Yazdi nisioka:
Misioka ao amin'ny ​​#FreeIranianSoldiers ireo olom-pirenena Iraniana ka manasokajy ireo miaramila tahaka ny rahalahiny fa tsy hery famoretan'ny fitondrana. Miaro ny azy manokana izy ireo
Mpisera Twitter monina ao Iran, Opium niantso ho amin'ny fampiraisana:
E ianareo, aza milaza amiko fa tsy misy intsony ny fanantenana. Miaraka isika mijoro, misaraka isika mianjera.
Hatramin'ny 2006 ny Balochi, izay mandrafitra ny 2 isan-jaton'ny mponina ao Iran no iharan'ny 20 isanjaton'ny famonoana araka ny fitsarana, hoy ny filazan'ny Fikambanana Abdorrahman Boroumand, vondrona ao Etazonia izay manjohy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Iran.
Mihevitra ny governemanta Iraniana fa miafina ao amin'ny faritanin'i Pakistana Balochistana ny jaish-ul-Adl, izay sisintanin'ny faritany Sistan-Balotchistana ao Iran. Miady amin'ny fikomiana Balochi ao aminy i Pakistana ary notsikerain'i Iran ho tsy maharava ny tobin'ny mpikatroka ao amin'ny sisintaniny.